August 2012 | နေမင်းဇွဲမာန်
ခဲတံကရတဲ့ အမှိုက်လေးတွေကို ပုံဖော်လိုက်တဲ့အခါ.....
ခဲတံလေးတွေမှာ ခဲသားလေးတွေကိ်ုပဲ ပုံဆွဲဖို့ ၊ စာရေးဖို့ အသုံးဝင်တယ်လို့ ထင်ခဲ့ရပေမယ့် Kyle Bean
ဆိုတဲ့ ပုံဖော်ပညာရှင်တစ်ယောက်က ခဲတံချွန်လို့ရလာတဲ့ အမှိုက်လေးတွေကို သုံးပြီ
at Friday, August 31, 2012 1 comments
ဥပေါင်းငါးထောင်ကျော်နဲ့ ပုံဖော်ထားတဲ့ မြို့လေး....
တရုတ်နိုင်ငံက ပညာရှင် တစ်ယောက်က ဖန်တီးထားတာ ဖြစ်ပြီး ဥပေါင်း ငါးထောင်ကျော်နဲ့
တည်ဆောက်ထားတဲ့ (6m*4m) မြို့ပုံစံလေး ဖြစ်ပါတယ် ။
at Thursday, August 30, 2012 1 comments
အံ့သြဖွယ်ရာ သစ်ရွက်ပုံဖော်မှု အတက်ပညာ....
အရွက်လေးတွေကို ပုံဖော်ထားတာလေးတွေ တွေ့လို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ ။
at Tuesday, August 28, 20124comments
ထင်ရှားလှပတဲ့ ပန်းပွဲတော်လေး တစ်ခု....
California ပြည်နယ်မှာ နှစ်စဉ်ပြုလုပ်တဲ့ Epcot ပန်းပွတြော် ပုံရိပ်လေးတွေ ဖြစ်ပါတယ် ။
အသီးပုံဖော်မှု အိုင်ဒီယာ အလန်းလေးတွေ....
romatic ဆန်ဆန် ဂီတအိမ်ကလေး....
ဒီအိမ်ပုံစံလေးကတော့ တရုတ်နိုင်ငံမှာတည်ရှိပြီး ဂီတကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ ၊ romatic ဆန်ဆန် နေထိုင်ချင်တဲ့သူတွေ အတွက်တော့ နေချင်စရာ နေရာကောင်းလေး တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ အချစ်သက်သေ သော့ခလောက်လေးတွေ....
ရောင်စုံမီးခြစ်ဆံထိပ်ပိုင်းလေးတွေကို အသုံးပြုပြီး ပုံဖော်ထားတဲ့ ပုံစံလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ် ။
at Wednesday, August 22, 20123comments
10. Trilobis 65
အရင်တစ်ခါလည်း တင်ခဲ့ဖူးပါတယ် ခုလည်း ထပ်တွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ ။ အနုစိတ်ပြောင်မြောက်တဲ့ ဖန်တီးမှု လက်ရာလေးတွေပေါ့ ။
ဂန္ဓမာပန်းတွေနဲ့ ပုံဖော်ထားတဲ့ ပန်းပွဲတော်လေး...
နှစ်စဉ် အောက်တိုဘာလမှာ ကျင်းပလေ့ရှိတဲ့ ဂျာမနီနိုင်ငံ Lahr လို့ ခေါ်တဲ့ မြို့တော်ရဲ့ ရောင်စုံ ဂန္ဓမာပန်းတွေနဲ့ စီခြယ်ပုံဖော်ထားတဲ့ ပန်းပွဲတော်လေး ဖြစ်ပါတယ် ။ ပုံဖော်ထားတဲ့ ပန်းပုံစံလေးတွေကို ကြည့်ရှုသွားကြပါဦး ။
at Saturday, August 18, 20123comments
ထူးထူးခြားခြား လှေပုံစံတည်ဆောက်ထားတဲ့ ဟော်တယ်လေး....
ဒီဟော်တယ်လေးကတော့ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲက Maldives ကျွန်းစုတွေထဲက Cocoa လို့ ခေါ်တဲ့ ကျွန်းလေးမှာ တည်ရှိပါတယ် ။
at Saturday, August 18, 20127comments
ရှားရှားပါးပါး နှာခေါင်းကြီးနေတဲ့ မျောက်မျိုးစုလေးတွေ....
ဒီမျောက်မျိုးနွယ်စုကိုတော့ (proboscis monkey) လို့ ခေါ်ကြပြီး
တစ်နည်းအားဖြင့် နှာခေါင်းကြီးတဲ့မျောက်တွေလို့လည်း မှတ်ယူနိုင်ပါတယ် ။ ရေကူးရာမှာ ကျွမ်းကျင်ကြပြီး
ကမ္ဘာ့အရှားပါးဆုံး မျောက်မျိုးစုတွေထဲမှာလည်း ပါဝင်ပါတယ် ။ ဒီမျောက်လေးတွေကို
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘော်နီအိုကျွန်းစုက သစ်တောတွေထဲမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ် ။
at Wednesday, August 15, 20125comments
ကြောင်လေးတွေကို အကျီင်္လှလှလေးတွေ ဆင်ကြမယ်....
ကြောင်ချစ်တဲ့သူတွေ ကြောင်လေးတွေကို အဝတ်အစားဆင်ပေးနိုင်ဖို့ တွေ့လို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
at Tuesday, August 14, 20124comments
နီပေါနိုင်ငံမှာ တည်ရှိပြီး အမြင့် ၈၀၉၁ မီတာ မြင့်ပါတယ် ။ ၁၉၅၀ ခုနှစ်မှာ ဒီတောင်ပေါ်ကို ပထမဆုံး ခြေချနိုင်ခဲ့ပြီး ဒီလိုခြေချနိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ ပြင်သစ်နိုင်ငံသား M. Herzog နဲ့ L.Lachenal ဖြစ်ပါတယ် ။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ နေထိုင်ရန်သင့်တော်သော ဈေးအကြီးဆုံး ဟိုတယ်များ...
သေဆုံးသွားတဲ့ အပင်ခြောက်လေးတွေကို ထူးခြားလှပတဲ့ အရောင်လေးတွေ ခြယ်ပြီး စိတ်ဝင်စားမှုတစ်ခု ဖြစ်သွားအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက်ကတော့ အမေရိကန် နိုင်ငံသား Curtis Killorn ဖြစ်ပါတယ် ။ သူရဲ့ ဆေးရောင်ခြယ် သစ်ပင်လေးတွေကို ရှုစားကြည့်ကြပါဦး ။
ဖိနပ်လေးတွေက သိပ်တော့မလှပါဘူး ။ ပုံစံအမျိုးမျိုးလေးတွေပေါ့ ။
၂၀၁၂ ကမ္ဘာပေါ်တွင် နေထိုင်ရန် ဈေးအကြီးဆုံး ဖြစ်လာသည့် မြို့တော်များ....
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ရေကူးကန်လေးတွေ....
10. Park Hyatt Pool(Tokyo)
at Saturday, August 11, 20127comments
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ အခမ်းနားအကြီးကြယ်ဆုံး နေရာ (၁၀) နေရာ...
ဒီနေရာလေးတွေကိုတော့ မသေခင်ရောက်အောင် သွားလည်သင့်တယ်လို့တောင် တင်စားထားပါတယ် ။ ဘယ်နေရာလေးတွေလဲ ဆိုတာ ကြည့်ရှုသွားကြပါဦး ။
၂၀၁၂ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများကို အဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံး နိုင်ငံများတွင် မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်လာခဲ့....
၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ကမ္ဘာပေါ်တွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား အများဆုံး အသုံးပြုသည့် နိုင်ငံများ....
at Friday, August 10, 20125comments
စိတ်အေးချမ်းမှု ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ အိပ်ရာပုံစံလေးတွေ...
စိတ်အေးချမ်းမှု ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ အိပ်ရာပုံစံ အမျိုးမျိုးလေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
at Thursday, August 09, 20125comments